Ukusetshenziswa Nemiphumela Yezinhlangano Ezingenzi Nzuzo
NgoMsombuluko, Ephreli 9, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sisebenze nezinhlangano ezingenzi-nzuzo eziningana eminyakeni edlule futhi kuhlala kubonakala sengathi kunezinhlobo ezimbili zebhajethi engenzi nzuzo… zero noma amathani. Ngobabili, ngimangele ngokweqiniso ukuthi bambalwa kangakanani abafake izingosi zokuxhumana kanye nemithombo yezokuxhumana ekuxubeni kwabo. Abaholi abangenzi inzuzo bangamakhosi kwezokuxhumana, kepha akubonakali sengathi bathole amathuba okukhulisa leyo nethiwekhi online.
Ucwaningo oluvela ku-2012 Nonprofit Social Networking Benchmark Report lukhombisa ukuthi iZingenzi-nzuzo ziyaqhubeka nokukhulisa ubukhona bazo kumanethiwekhi omphakathi ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi noma imali. Ukuntywila ngokujulile ekutheni izinhlangano ezingenzi inzuzo zizuza kanjani le miphumela kuveze imininingwane ebalulekile.
Uma kuke kwaba khona inombolo okufanele imenyezelwe kusuka ophahleni lwendlu, kungenxa yokuthi idatha ikhombisa ukuthi isilinganiso se-Facebook Like singabiza u- $ 3.50 kepha imali ekhiqizwayo ingama- $ 214.81. Lokho kuyinzuzo enhle ekutshalweni kwemali. Okusemqoka kulo mthetho omangalisayo ukuthi okungenzi-nzuzo kuguqula izimpilo futhi ngokujwayelekile kunendaba emangazayo yokwaba… ukuthinta izinsiza zenhlalo kuzonanela leyo ndaba futhi kwabiwe ngayo nomphakathi wabanye abazophendula.
Tags: umbiko wokumaokungeyona inzuzookungenzi inzuzouphawu lokungenzi-nzuzosocial media
Izibalo Ze-imeyili Yeselula